Daalụ in English. Daalụ Meaning and Igbo to English Translation
Home>Words that start with T>Thank you>Daalụ (Igbo to English translation)
What does Daalụ mean in English? If you want to learn Daalụ in English, you will find the translation here, along with other translations from Igbo to English. We hope this will help you in learning languages.
Here is Daalụ meaning in English:
agba ajụjụ ọnụ
Gịnị bụ ọkacha mmasị gị egwuregwu?
Gịnị ka ị chọrọ ịzụta?
laghachi a oku na-aga
M ga-enye gị a oku na-aga
M mkpa uwe ọhụrụ
Nye m pen
Ọ dị m nwute nke ukwuu
Were oge ị chọrọ